Iindaba -Izibonelelo kunye nokuthintela ukufaka imitha yombane kunye nesiguquli sangoku
Izinto eziluncedo kunye nokuthintela ukufaka imitha yombane kunye nesiguquli sangoku
Kutheni le nto imitha kufuneka ixhotyiswe ngesiguquli? Oku ukunqanda ukutshisa imitha kunye nokonga imali. Ngokumalunga nokonga imali, ixabiso lemitha encinci yangoku kunye nesiguquli liya kuba sezantsi kunelo lemitha enkulu yangoku. Ngokwembono yokhuseleko lwemitha yombane, ukuba inani langoku kulo lonke iluphu lidlula uluhlu lokunyamezelana kwemitha, iya konakala. Ukuthintela ukutshisa imitha, kufuneka kufakwe umgangatho olungileyo 11kv isiguquli sangoku.
amanyathelo okuthintela ukufakwa kwemitha yombane kubandakanya ezi zinto zilandelayo:
1. Jonga phambi kofakelo
Jonga imitha ngaphambi kokuyifaka, ikakhulu ukujonga ukuvela kwemitha. Lumka xa ujonga ukuthintela ukuthenga iimveliso ezingaphantsi. Ngokubanzi, iimitha eziveliswa ngabavelisi abaqhelekileyo ziya kuba nesitywina, ngakumbi sinikele ingqalelo kweli nqanaba, ukubona ukuba itywina liphelele, kwaye linokufakwa kuphela emva kokuphumelela kuvavanyo.
2. Indawo yofakelo
Imitha ayifakwanga ngokungacwangciswanga kufutshane nomnyango wokungena. Inemfuno ezithile zokusingqongileyo. Kungcono ukuyifaka kwindawo engenanto. Ngaphakathi -40 iidigri, ukufuma akunakuba ngaphezulu kwe-85%, kwangaxeshanye akunakubonakaliswa ngokuthe ngqo kukukhanya kwelanga, ukuphakama kugcinwa kwi-1.8m.
3. Umsebenzi wokufakwa
Xa ufaka imitha, kuya kufuneka uyifake ngokwedayagramu ye-wiring, qhagamshela iingcingo ezingasentla nganye nganye, isikrufu ngasinye masimiswe endaweni, kufuneka uvavanye emva kofakelo, kwaye ungayisebenzisa emva kokuphumelela uvavanyo.
Ixesha Post: Jul-17-2020